30W Epeepe Okpu Uhie China Manufacturer
Nkọwa:Okpokoro Ogige Uhie Mbara 30w,Azụ Uhie anyanwụ maka ire ere,Atụmatụ Oke Osimiri Ochie
Home > Ngwaahịa > Mbara Igwe Ochie > 30w Sun Street Street > 30W Epeepe Okpu Uhie
Igwe Uhie anyanwụ na-enwu gbaa 30w bụ ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa nchekwa dịpụrụ adịpụ. Nke a na- enwu ọkụ maka anyanwụ na-ewu na batrị lithium na usoro nkwụghachi na-enye ọnọdụ siri ike, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Ewube Owu Osimiri Uhie nwere oghere ehihie na abalị na ụda ihe ntụgharị nke na-ejikwa aka na gbanyụọ na ọrụ dimkpa na-agbatị ndụ batrị. Nchebe anyanwụ a na-enye ìhè n'osisi ga-eme ka ìhè ruo ụbọchị 4 na ọnọdụ ihu igwe ma ọ bụ dị egwu (n'ọnọdụ ọnọdụ, okpomọkụ na oge). Anyị bụ ndị na- eweta ihe ọkụ ọkụ dị na China.
Okpokoro Ogige Uhie Mbara 30w Azụ Uhie anyanwụ maka ire ere Atụmatụ Oke Osimiri Ochie Okpokoro Ogige Ubi Mgba Igwe Okpokoro Ogige Uhie Osisi 50w Okpokoro Ogige Uhie Oghere Okpokoro Ogige Uhie N'èzí Okpokoro Ogige Ubi Na-ejide Ya